निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै नेपाल महिला संघले माग्यो गृहमन्त्रीको राजिनामा (प्रेस विज्ञप्तीसहित) – Merodesh.news
निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै नेपाल महिला संघले माग्यो गृहमन्त्रीको राजिनामा (प्रेस विज्ञप्तीसहित)
२३ मंसिर २०७५ मेरोदेश सम्वाददाता
काठमाडौं, २३ मंसिर । नेपाल महिला संघले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’को राजिनामा माग गरेको छ ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा नेपाल महिला संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन वर्तमान सरकार असफल भएको दाबी गर्दै गृहमन्त्री थापाको राजिनामा माग गरेको हो । कार्यक्रममा संघकी महासचिव तथा राष्ट्रिय सभाकी सदस्य धना खतिवडाले नक्कली अभियुक्त खडा गरेर निर्मला पन्तका बास्तविक हत्यारालाई सरकारले उन्मुक्ति दिन खाजेको आरोप लगाएकी छिन् ।
निर्मला पन्तको हत्या सामान्य खानदानको मानिसले नगरेको पनि उनको दाबी छ । खतिवडाले भनिन्,‘निर्मलाको हत्या सामान्य खानदानको मान्छेले गरेको होईन भन्ने कुरा आम नागरिकले महसुस गरिसकेका छन्, अहिले खडा गरिएका अभियुक्तका बयान र निर्मला पन्तको पोष्टमार्टम रिपोर्टले फरक सत्य बताएको छ, यस्तो नाटक गरेर जनता र गरिबहरुमाथि दुई तिहाई नेकपाको सरकारले खेलबाड गरिहेको छ, के यसरी समृद्ध र सुखि नेपाली बन्छन् ? म सोध्न चाहन्छु यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन् ?
नेपाल सनतान धर्मको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको देश भएको भन्दै सांसद खतिवडाले भनिन्,‘व्यक्ति जुनसुकै कार्यक्रम र सभामा सहभागि हुन पाउँछ तर सरकार नै विवादित धार्मिक संस्थाको आयोजक बन्नु कहाँसम्मको जायज हो ? यो आम नेपाली जनताको भावना र संविधान हित विपरित कार्य हो, सरकारको यस रबैयाप्रति महिला संघले आपत्ति जनाउँछ, महिलाकाबारेमा हामीले नगरे कसले गर्ने ? अहिले नगरे कहिले गर्ने ?’
महिला हिँसाविरुद्ध १६ दिने राष्ट्रिय अभियान जारी रहेको बताउँदै खतिवडाले अघि थपिन्,‘असल मानिस केही नगरि बस्नु भनेको खराब मानिसको नियत सफल हुनु हो’ राज्यले महिलाहरुकोबारेमा अधिकार दिएको छ, तर व्यवहारमा महिलाहरुले अधिकार पाएका छैनन्, कानून फितलो छ, बलत्कार, दण्डहिनता चरम पराकाष्ठा छ, अर्कोतर्फ मूल्य बृद्धि, कालोबजारी, भ्रष्टाचार मौलाएको छ, तीन तहको स्थानीय सरकार भएरपनि जनताले विधिको शासन र कानूनी राजको महसुस गर्न पाएनन्, देशको विकास र समृद्धि भाषणमा सिमित छ ।’
मिति : २०७५ मंसिर २३
देशमाहत्या, हिंसा र बलात्कारको विकरालअवस्था छ । राज्यको आभास जनताले गर्न सकेका छैनन् । निर्मला जस्ता कयौँ चेलीदिन दहाडै बलात्कृत हुनबाध्य छन् । तर सरकार हत्यारा खोज्न र सार्वजनिकगर्नभन्दापनि संरक्षण गर्न लागिपरेको देखिन्छ ।
आन्दोलनरत सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्नप्रहरीले नक्कलीअभियुक्त अघि सारिरहेको छ । निर्मलापन्तको बलात्कार र हत्या काण्डमा सरकारले दोस्रोपटक नक्कलीअभियुक्त अघि सारेको छ ।
सरकार आफैँ प्रमाण मेटाउँदै हिँड्ने, अहिले नक्कलीअभियुक्त अघि सारेर निर्मलालाई न्यायमिल्दैन । हाम्रो महिला संघको टिमले कंचनपुरसम्मपुगेर निर्मलाप्रकरणको स्थलगतनिरीक्षण र अध्ययनगरिसकेको छ ।
निलम्बनगरिएकाप्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टमाथि फौजदारी मुद्धा चलाएर कारबाही अघि नबढाएसम्म निर्मलाकाबलात्कारी र हत्यारा पत्तालाग्न सक्दैनन् । दूई तिहाई बहुमतको सरकारबाट देशमा समृद्धीको ढोकाखोल्नुपर्ने हो । यहीअनुरुपजनताको अपेक्षापनिअसिमितथिए । तरसरकारले समस्या समाधानगर्नुको साँटो समस्या सृजनागरिरहेको छ ।
निर्मला जस्ता हजारौँ चेलीहरु बलात्कृत भइरहँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । न्यायमाग्दै सडकमा उत्रेकाजनतालाई गोलीहानीहत्यागर्ने, खुट्टाभाँचिदिनेसम्मकानिर्मम कार्य भएका छन् । निर्मला हत्याकाण्डको विरोधमाआन्दोलनगर्दा घाइते भएकाविद्यार्थी अझै पनि अस्पतालमा छट्पटाइरहेका छन् । कसैको खुट्टाभाँचिएको छ, कसैको बोलीगुमेको छ । तर सरकार बलप्रयोग गरेर न्यायमाग्नेलाई जेल कोचिरहेको छ । के हो गणतन्त्र ? के हो राज्य? के हो विधिको शाषन? के यो देशमाकानुन छैन ?
निर्मलाको न्यायकालागिदबाबदिन टाँसिएका पोष्टर प्रहरीले नै च्यात्नुको नियत के हो ?निर्मलाको न्यायकालागिसम्माननीयराष्ट्रपति समक्षगुहार माग्नजानेलाई पक्राउगर्नुको अर्थ के हो ?जहाँ सम्माननीयप्रधानमन्त्रीको तस्विर राख्न मिल्छ त्यहाँनिर्मलाको न्यायकालागिपोष्टर टाँस्न किनमिल्दैन ?
नेपालका छोरीलाई न्यायदिनुको साटो इश्वरको एकमात्र छोरी भन्दै क्रिष्चियनधर्मलाई बढावा दिनर विवादास्पद संस्थाको अवार्डमासरकारको ध्यानकेन्द्रित छ । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा भएको कुनै एक कार्यक्रममा सरकारको सहभागिताआवश्यकथियो र ?
पछिलो समय दण्डहिनता र बेथितीले जनताआजित छन् । देशमामहिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानचल्दै गर्दा महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बग्रेल्ती सार्वजनिकभइरहेका छन् ।यो अभियानमा सरकारी खर्च बालुवामापानी सरह भएको छ । सरकारमातहतकानिकायकामगरिरहने, बजेट खर्च गरिरहने तर लक्षितवर्ग लाभान्वितहुननसकेको अवस्था छ । १६ दिने अभियानऔपचारिकतामामात्रै सिमितहुँदा सम्पूर्ण महिलाहरु चिन्तितबनेका छौँ । ५ महिनाहुनै लाग्दासमेत निर्मलाकाहत्यारालाई सार्वजनिक गर भन्दै जनताआन्दोलनमा छन् । तर सरकार भने आन्दोलनदमनगर्न केन्द्रितहुँदासरकारको नियतमाथि नै प्रश्नउठेको छ ।
निर्मलामाथिको अत्याचार यदी सामान्यनागरिकले गरेको हुन्थ्यो भने नत सरकारले हत्यारा लुकाउँथ्यो, न त प्रमाण नै मेटाउँथ्यो भनेर जो कोहीले अड्कल काटिसकेका छन् । हामीमहिलाहरु असुरक्षितभएको महसुसगरिरहेका छौँ । शान्ति सुरक्षाको आभास दिननसक्ने माननीयगृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमाराजिनामादिनुपर्छ । अझै पनि देशमा दण्डहिनता मौलाइरहने र सरकार गम्भीर नहुने हो भने नेपालमहिला संघले सडकदेखि सदनसम्मदबाबमुलकआन्दोलनकाथपकार्यक्रम सार्वजनिकगर्दै जानेछौँ ।
धना खतिवडा, महासचिव